सरकारलाई आफ्नो निर्णय अन्तिम सत्य हो भन्ने लाग्छ – अनुपराज शर्मा – Tahalka Nepal
Tahalka Nepal / समाचार / अन्तर्वार्ता / सरकारलाई आफ्नो निर्णय अन्तिम सत्य हो भन्ने लाग्छ – अनुपराज शर्मा
सरकारलाई आफ्नो निर्णय अन्तिम सत्य हो भन्ने लाग्छ – अनुपराज शर्मा
. २०७७ जेष्ठ १३, मंगलवार २३:२१ गते
अनुपराज शर्मा- अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
अनुगमनबाट स्थानीय तहबाट खासै योगदान भएको देखिएन। यसमा उसलाई मात्र दोष दिनु आवश्यक छैन। सरकारले पनि स्थानीय तहलाई विश्वासमा लिएर कामकारबाही अघि बढाएको पाइएन। प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचमा समन्वयको अभाव खट्केको छ। मलाई केही दिनअघि भारतको हिमाञ्चल प्रदेशबाट फोन आयो। त्यहाँ ३५ जना कामदार कामबाट निकालिएपछि अलपत्र परे। तिनीहरु नेपाल फर्कन चाहे। पहिले त दिल्लीसम्मकै अनुमति रोकिएको थियो। मलाई त्यहाँबाट अधिकारकर्मीले के खबर गर्नुभयो भने दिल्लीसम्मको अनुमति लिइदिन्छौं नेपालभित्र छिर्ने ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन ? मैले ग्यारेन्टी त गर्न सक्दिन भन्नुपर्ने अवस्था आयो। कहिले हामी भन्छौं, प्रवेश गर्न नदिने, कहिले भन्छौं प्रवेशको एउटा ‘सिस्टम्’ बनाउँदैछौं। यस्तो अन्योलताको स्थिति लामो समयसम्म राख्नु ठीक होइन।
उहाँहरुको ‘फिडव्याक’ भनेकै आयोगको रिपोर्ट र सञ्चारमाध्यममा खबर हुन्। उहाँहरुसँग कुरा गर्दा मानवअधिकारप्रति सरकारको प्रतिवद्धता रह्यो, कार्यान्वयन भएन भन्ने छ। प्रतिवद्धता मात्रैले कहाँ हुन्छ ? कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो। यसमा पछाडि परेको भन्ने छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट वाट)